Nin Ganacsade ah oo Balad-wayne lagu dilay | maakhir.com
Nin Ganacsade ah oo Balad-wayne lagu dilay
January 26, 2008 in Somalia
Baladwayne:- Wararka naga soo gaadhaya magaalada Baladwayne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in maanta nin ganacsade ah la gu dilay meel wax yar u jirta Magaalada Baladwayne, ninkaas Ganacsadaha ah ayaa la socday gaadhi xamuul ah waxana rasaas ooda kaga qaaday koox budhcad ah oo markaasi jidka joogtay.
Maleeshiyadda weerarka u geysatay gaarigaasi, ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen deegaanka Maroodaale oo u dhexeysa magaalladda Beled-weyne iyo Deegaanka Far-libaax, waxayna tachsiiradda huwiyeen gaarigaasi, kadib, markii uu Dareewalkii xoog ku gudbay bar Maleeshiyadda Isbaaro u taallay.
Ninkaas ganacsadaha ah ayaa waxa lagu magcaabi jiray Cali Maxamed Cismaan waxana ay rasaasi ka ga dhacday Madax isaga oo loola cararya Cisbitaalka magaalada Baladwayne Balse uu markii ruux baxay.
Taliyaha Booliska ee Gobolkaasi ninka lagu magcaabo G/dhexe Cabdi Aadan ayaa sheegay inay wadaan baadhitaano xoogan kuwaasi oo ay doonayaan inay ku soo qabtaan ragii falkaasi ka danbeyay Taliyuhu waxa uu sheegay inay jiraan dad arinkaasi loo xidhiidhinayo oo ay Boolisku gacanta ku soo qabteen walina ay wadaan baadhitaankooda.
Guud ahaan xaalada Magaalada Baladwayne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa degan oo aanay jirin wax dhiila colaadeed ah oo laga dareemayo marka laga reebo Ciidamo fara badan oo jooga wadooyinka kuwaasi oo sugaya Amaanka.
« Wariyihii SBC u shaqayn jiray ee maanta la xidhay ayaa dib xoriyadiisii u helay
Shir lagu jeex jeexayay arimaha Deegaanka ayaa maanta Bosaaso ka dhacay »